pp rakakomberedzwa jira rekuvaka Fekitori | China pp pepa rerata rekuvaka Vagadziri, Vatengesi
PP chemarata pepa redziviriro uye kuvaka inodzivirirwa inogona kuitwa yakagadziriswa saizi uye rolls, kazhinji iyo hukobvu ndeye 2-12mm gobvu, maererano nechikumbiro chakasiyana, inogona kuitwa dziviriro ye-ultra-violet, anti-static, conductive, murazvo unodzora, tsika mavara, anoparadza inhibitors akaita akakosha pp mhango jira.
Isu ndisu tinogadzira mapeji erukisi pepa, mapeji ane mhango pamusoro pemakore gumi nemaviri muSenzhen China, iro rakakomberedzwa jira chinhu chitsva chepurasitiki zvinhu zvinoshandiswa zvakanyanya mumarudzi ese emaindasitiri, kuitira kurongedza kazhinji kurongedza bhokisi, mutero bhokisi, rekudhinda kushambadza bhodhi, bhodhi yemasaini, iyo pepa rakakomberedzwa pepa iri Eco-inoshamwaridzika, kurema uremu, yakasimba uye isina mvura uye zvichingodaro.
China Fekitori PP Coroplast Bhodhi Plastiki Hollow Sheet reKutakura / Rukoko / Kushambadzira / Kudzivirirwa
pp chemarata pepa zvakare zita pp isina mhango pepa, iri inochinjika epurasitiki bhodhi inogona kushandiswa mune ese marudzi emaindasitiri, pp chemarata pepa inogona kuve yakagadzirirwa diecut nechero chimiro uye saizi, ndeimwe yezvakakosha kuputira zvinhu, inogona zvakare kushandisa mukuvaka senge choumba bhodhi uye kufefetedza, pasi kudzivirira uye zvichingodaro. Sekushandisa kwakasiyana, inogona kugadzirwa, kunama. Kuve tichitsigirwa neyemberi uye nyanzvi IT timu, isu tinogona kupa tekinoroji rutsigiro pane pre-kutengesa & ...
Kupisa kutengeswa China 4X8 Coroplast PP Hollow Corrugated Plastic Sheet